Alicia Keys aive 'akapindwa muropa' nekuzora, akabva asiya - Nhau
Alicia Keys aive 'akapindwa muropa' nekuzora, akabva asiya
Munyika ye glitz uye glamour, Alicia Keys akaveza nzira yake ega makore mana apfuura paakafunga kuramba makeup, chimwe chinhu chingadai chisati chambo nzwika panguva iyoyo munyika yevaraidzo. Mune nhaurirano nyowani, Alicia anonongedza kuti akafunga kurega kushandisa makemikari nekuti yaive neanodhonza paari.
'Makeup chaive chinhu chikuru kwandiri; Ndakanga ndave ndichipfeka kubvira ini, senge, makore gumi nematanhatu, 'iye akaudza Glamour UK . Uyezve, pandakapinda munyika yemimhanzi, ndizvo zvawakaita mazuva ese kuita yako terevhizheni, kana kuita kupfura kwako. Saka, ndakazviita nekuti ndakafunga kuti ndizvo zvaunofanirwa kuita. Uye ndakaona kuti ndakapindwa muropa nazvo; Handina kunzwa kusununguka ndisina. '
kevin hart yakazara bonde tepi
Kudzoka muna 2016, uyo anokunda Grammy akazivisa kuti haachazoshandise makeup. Gore rimwe chetero akaenda akashama paari 'Pano' kabhodhi album.
'Ndinopika kuti ndiyo yakanga yakasimba kupfuura dzose, yakapihwa simba, yakasununguka, uye yakatendeseka kwazvo yandati ndambonzwa,' akanyora muchinyorwa cheLenny Letter. 'Handichadi kuvanza. Kwete chiso changu, kwete pfungwa dzangu, kwete mweya wangu, kwete pfungwa dzangu, kwete zviroto zvangu, kwete matambudziko angu, kwete kukura kwangu kwepfungwa. Hapana. '
Paanenge achiri kuenda kumitambo isina-makeup, akati zvigadzirwa zvekunaka hazvichamubati, saka akasununguka kuzvipfeka… kana kwete.
'Ini handisi muranda wemakeep. Ini handisi muranda wekusapfekawo makeup. Ini ndinofanira kusarudza chero [chero nguva] yakapihwa nguva. Ndiyo kodzero yangu, 'akaudza Allure gore rapfuura.
Mativi mazhinji eAlicia️ Nderipi divi rinomiririra iwe nhasi? 1, 2 kana 3? Ishoko ripi raungashandisa kutsanangura mamiriro ako?
Chinyorwa chakagovaniswa na Alicia Keys (@aliciakeys) munaNovember 2, 2020 pa12: 52 pm PST
Mune matatu ake matsva eGlamour UK anofukidza, anozvishongedza zvemaviri avo uye anoenda zvakasikwa mune imwe.
Nemativi mazhinji ake mupfungwa, muimbi ava kuvhura mararamiro nemhando yerunako inonzi Keys Soulcare.
'Ndakagara ndine nguva yakaoma neganda rangu uye kuona nzira yekuzvibata nayo, uye kuve munzvimbo inoonekera,' akadaro. 'Kugara ndichigara mune ino yakapenga kutenderera yekuzora-pomba kuvhara mabump uye mavanga uyezve nekuti ini ndaive ndakagadzira-pasi pemarambi anopisa, pakanga paine mamwe mapundu uye mavanga. Ndainzwa kunge ndaifanira kuviga zvese uye ndainzwa kuzvinyatso. '
'Ndakatambura zvakanyanya muganda rangu uye kunyatso kuve kujekesa nezvekuzvivimba uye kuzvikoshesa,' akaenderera mberi. 'Saka, zviroto zvikaitika, [sezvo] ini ndagara ndichida kugadzira chimwe chinhu [chakadai] nekuti ndaida chimwe chinhu chingandishande pandainzwa nguva dzakaoma; izvo zvaizoita kuti ndinzwe ndakakura uye zvaive zvakandinakirawo. '
James Blunt anoratidza shamwari yepedyo Carrie Fisher anogona kunge akafanotaura kufa kwake
Patty Hearst anodzivirira mukuwasha Chris Hardwick pakati pekurwadziswa kubva kune wake wekare
ndiani john corbett kudanana
ndiani josh lucas akavimbiswa naye
uyo akange akaroora arnold schwarzenegger
vanhu vangani vari muvateereri va ellen
ine kurarama nekelly ratings yakadonhedzwa